ဝေးလံခေါင်သီလက်ဗွေ Android အတွက် Download APK ကို Unlock
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » ဝေးလံခေါင်သီလက်ဗွေသော့ဖွင့
ဝေးလံခေါင်သီလက်ဗွေသော့ဖွ APK ကို
အဝေးမှနဲ့လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့ Android ရဲ့လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု. သင်၏ Windows PC ကိုသော့ဖွင့်။
အလုပ်လျှောက်လွှာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ Windows PC မှာ (Windows Vista /7/ 8 / 10) ပေါ်တွင်လက်ဗွေယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးသူ module တစ်ခု install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 64-bit မှာက Windows တပ်ဆင်မှုအတွက် 64-bit မှာသို့မဟုတ် x86 များအတွက် x32: သက်ဆိုင်တဲ့ဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဒီမှာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်: http://bit.ly/2Q4YoUP
အဆိုပါ module တစ်ခုသာ logon screen ကိုတက်ကြွစွာအခါပြေး, ဒါကြောင့်, အမိန့်ရှိသင့်ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်အကောင့်တစ်ခုပေါင်းထည့်, etc, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို lock (Windows Key + L ကို, သို့မဟုတ် Start Menu မှ) ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာသင်ကအပေါ်က link ကိုမှာပါတဲ့ Windows ကို module ကို install လုပ်ထားပြီသေချာပါစေ။
အဆိုပါ Scan ကိုမီနူး (သင့်ကွန်ပျူတာ logon screen ပေါ်မှာကြောင်းကိုသေချာအောင်) သွားပြီး refresh (Wi-Fi ကိုအသုံးပြုသည်) သို့မဟုတ် add button ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်သော့ဖွင့၏ဦးစားပေးနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ဆွဲထုတ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Select လုပ်ပါနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်နှိပ်ပါ။
အခုတော့ Accounts menu ကိုသွားပြီးအကောင့်တစ်ခု Add ကိုနှိပ်ပါ။ သငျသညျသော့ဖွင့်ချင်သောက Windows အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါ။ အတူတူသက်ဆိုင်ရာ password ကိုအတူအတိအကျ (ဒိုမိန်းအမည်, အမှုအထိခိုက်မခံအပါအဝင်) ကို lockscreen အပေါ်အဖြစ်ပြသနာမကိုအမှီကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့လက်ဗွေရာနှင့်စာနယ်ဇင်းက Add scan လုပ်ပါ။
PRO အသုံးပြုသူများအတွက်: အကဆက်ပြောသည်အကောင့်အသစ်များ၏တဦးတည်းကိုရွေးပါရန်, အကောင့်အမည်ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ သင်သည်သင်၏လက်ဗွေ scan ဖတ်တဲ့အခါမှာသော့ဖွင့်ချင်ပါ။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး configure လုပ်ဖို့, ၎င်း၏အမည်ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
သငျသညျယခုအားလုံးအစုံပါပဲ! အဆိုပါသော့ဖွ menu ကိုသွားပါနှင့်သင့်လက်ဗွေ scan ။ သငျသညျယခုသင်၏ကွန်ပျူတာကို unlocked ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
• Log-သို့ / အကောင့်တစ်ခု Unlock
•ရိုးရှင်းသော, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ UI ကို
•ဒေသခံ / မိုက်ကရိုဆော့ဖ / ဒိုမိန်း * ထောက်ခံမှုအကောင့်
•အလင်း / အမှောင် / က Black (AMOLED-friendly) UI ကို themes များ
•ဒေသခံကွန်ရက် / Bluetooth ကို / က Wi-Fi ကိုချိတ်တွဲထောက်ခံမှု
* ယခုအချိန်တွင်မှာဒိုမိန်းအကောင့်ကိုသာ Windows ကို module တစ်ခု၏အနည်းဆုံး 8 ဗားရှင်းအပေါ်ကို Windows 1.0.3 + ကွန်ပျူတာများအပေါ်ထောက်ခံနေကြသည်။ သင့်အကောင့်ကဒီအလုပ်လုပ်နိုင်စေဖို့အတှကျ lockscreen အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရပေးပါ။ ဒါဟာအခြားအသုံးပြုသူများ menu ကိုအသုံးပြုပြီး logging အသုံးပြုသူများအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ app ကိုခုနှစ်တွင်ရိုးရှင်းစွာအတူတကွသက်ဆိုင်ရာ password ကိုအတူအတိအကျ (ဒိုမိန်းအမည်, အမှုအထိခိုက်မခံအပါအဝင်) ကို lockscreen အပေါ်အဖြစ်ပြသနာမကိုအမှီကိုအသုံးပြုပါ။
PRO features တွေ:
•သော့ဖွ Widgets တွေ
•ပိုစီစဉ်ထား features တွေ
သင် PRO အဆင့်မြှင့်ရှိပါကသင်လိုချင်သောကွန်ပျူတာပေါ်မှာနှိပ်နှင့် "WoL-အစုံလိုက်သုံး packet Send" ticking အားဖြင့်အပေါ် Lan တွင်ဝိတ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းကိုဖတ်ရှုရန်သေချာစေပါ ကျေးဇူးပြု. အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ သင့်ရဲ့ PC မှာ WoL ထူထောင်ရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာ troubleshoot ကူညီစေခြင်းငှါမဆိုအခြားအကြံပေးချက်များသည်: http://bit.ly/2N9bzFV
စိတျထဲမှာလုံခြုံရေး, app ကိုနှင့်အတူတညျဆောကျခံနေရ:
•လုံခြုံစိတ်ချစွာ data တွေကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လှေတျတျောမူကိုအကုန်အအများသုံးကွန်ရက်ပေါ်မှာအသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။
• app ကို installation ကိုသတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့ထူးခြားတဲ့ key ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစာဝှက်ပေးတယ်။
•က Android app ထဲတွင်မည်သည့် password ကိုသိမ်းဆည်းထားမကိုမပေး။
•လည်းသင့်ကွန်ပျူတာသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုကနေတိုက်ခိုက်တားဆီးပေးပါသည် - တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးကသင်၏ PIN ကိုသိတယ်မိမိလက်ဗွေရာဖြည့်စွက်လျှင်, app ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားနှင့်အလိုအလြောကျအစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်သည့်သိုလှောင်ထားသောပုဂ္ဂလိက app ကိုသတင်းအချက်အလက်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သော့ invalidates ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအနာဂတ် updates များကို:
• Linux ကိုထောက်ခံကြောင်း
• app ကိုအတူကွန်ပျူတာကိုသော့ခတ်
WindowsSystem32: ကို C မှာတွေ့ရတဲ့ LogonUI.exe လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင်၏ firewall အတွက်အဝင်အထွက်အသွားအလာ (TCP နှင့် UDP ကိုနှစ်ဦးစလုံး) ကိုခွင့်ပြုရန်သေချာစေပါ။ သင်က Windows Firewall ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကဤသူသည်သင်တို့အဘို့အလိုအလြောကျအမှုကိုပြုချင်တယ်ဆိုရင်သင်က installation ကိုမှာဟုမေးပါလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်အခက်အခဲဖြေရှင်းမှုအကြံပေးချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုများအတွက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစစ်ဆေးသို့မဟုတ်သင် app ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါ။
အဆိုပါ Android ကိုမေးစကင်ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုယခု fixed နေပါသည်!
ဒီအလုပ်ကသင်သည်လည်းယခုကိုလည်းမွမ်းမံမှုများအဘို့အစစ်ဆေးနေတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်ဖြစ်သော Windows ကို module, update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ download link ကို app ကိုဖွင့်ဖော်ပြချက်များတွင်ပါ!
2.86 ကို MB